आज सोमबारः कस्तो होला राशिफल ? पूर्वतर्फको यात्रा निषेध| Gandaki Voice
आज मिति २०७८ श्रावण १८ गते सोमबार, इस्वीसंवत अगष्ट २ तारिक सन् २०२१, श्रीशाके १९४३, नेपाल संवत् ११४१, राक्षश नामको संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलाद्र्धमा छन् ।
वर्षा ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार श्रावणकृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज श्रावणकृष्णपक्षको नवमी तिथि रहनेछ । आज कृत्तिका नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा वृद्धि, करणमा वणिज, आनन्दादि योगमा स्थिर रहनेछ ।
सूर्य कर्कट राशिमा, चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछ । आज दिनमान ३३ घटि ३६ पला अर्थात १३ घण्टा ४१ मिनेटको रहनेछ । आज सूर्योदय काठमाडौं केन्द्र विन्दुमा रही बिहान ५ बजेर २८ मिनेटमा मित्र मुहूर्तमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ ठीक ६ः५० बजे हुनेछ ।
वृषः आज पनि समय अत्यन्त शुभ रहनेछ । स्वास्थ्य सन्तुलित रहने देखिन्छ । आदर-सत्कार पाइनेछ । घरमा पारिवारिक सहयोग राम्रैसंग पाइनेछ । नयाँ वस्तु किन्ने, मीठो परिकार खान पाइने दिन रहेको छ । आफन्तको आगमनले घरमा खुसीयाली छाउनेछ । शत्रुमाथि आफ्नो जीत हुनेछ । समय शुभ रहेको हुनाले सही उपयोग गरेमा महत्वपूर्ण उपलव्धि हात लाग्नेछ ।
कर्कटः आज समय शुभ छ । एक्कासी आम्दानी बढ्ने काम भेटिने छ । जे पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ आम्दानी राम्रै रहनेछ । नयाँ व्यवसाय आज शुरु गर्नुभएमा राम्रो हुने ज्योतिष वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा देखिएको छ । पुराना इष्टमित्र, मान्य व्यक्तिसंगको भेट उपलब्धिमूलक नै रहनेछ । आज जे काम गर्दै हुनुहुन्छ प्रतिफल राम्रै पाइनेछ । टाढाको यात्रा रमाइलो र फलदायी हुनेछ ।
वृश्चिकः आज पनि स्वास्थ्य राम्र्रो रहनेछ । गर्न खोजेका सबै काम सफल, प्रेमी-प्रेमिकाबीच सम्बन्ध थप गाढा हुन सक्नेछ । पारिवारिक सदस्य तथा कर्मचारीबाट राम्रो सहयोग प्राप्त हुनेछ । आज रोकिएका सबै काम पूरा हुनेछन् । राम्रो समयको सही उपयोग अवश्य गर्नुहोला । नयाँ-नयाँ कार्ययोजना बनाउने दिन आज रहेको छ । हार्डवयर सम्बन्धी पेशामा उच्चतम् लाभ पाइने देखिन्छ । धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट सम्मान पाइनेछ ।
मकरः आजको समय खराब छ । बोली वचनमा शिष्टता र सकेसम्म नरम भई काम लिनुमा नै बुद्धिमानी हुनेछ । आफू मातहतका कर्मचारीमा विवादको अवस्था देखा पर्नेछ, जसमा आफू तटस्थ रहनु नै राम्रो हुनेछ । व्यापार र व्यवसायमा आज त्यति लाभ देखापर्ने छैन । परिवारको कुनै सदस्यलाई औषधि उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यात्रामा पनि तनाव उत्पन्न हुनेछ । आज सबै कार्यमा चनाखो र सतर्क हुनुहोला ।
मीनः आज समय शुभ छ । आरोग्यता, प्रशन्नता बढ्नेछ । गर्न खोजेका काममा आत्मविश्वासका साथ पूरा गर्न सक्नु हुनेछ । सोचेका सबै धार्मिक काममा राम्रो सफलता मिल्नेछ । कुखुरा पालन व्यवसाय तथा फ्रेस हाउस सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने आजबाट शुरु गर्नुहोला । जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि आज बैनापट्टा गर्दा राम्रो हुनेछ ।
बिहान ५ः२७ बजेदेखि ७ः०७ बजेसम्म अमृत बेला
बिहान ७ः०७ बजेदेखि ८ः४८ बजेसम्म काल बेला
बिहान ८ः४८ बजेदेखि १०ः२९ बजेसम्म शुभ बेला
बिहान १०ः२९ बजेदेखि १२ः१० बजेसम्म रोग बेला
बिहान १२ः१० बजेदेखि १ः५० बजेसम्म उद्धेग बेला
दिनमा १ः५० बजेदेखि ३ः३१ बजेसम्म चर बेला
दिनमा ३ः३१ बजेदेखि ५ः१२ बजेसम्म लाभ बेला
दिउँसो ५ः१२ बजेदेखि ६ः५३ बजेसम्म अमृत बेला
असोज ८ गतेः काल बेला पनि परेको छ, पश्चिमतर्फको यात्रा गर्नुहुँदैन, कस्तो होला राशिफल ?
असोज ६ गतेः लाभ बेलाबाट दिन शुरु भएको छ, कस्तो होला राशिफल ?